Muxuu ka yiri Zidane kaddib markii ay Man City u soo baxday wareega siddeeda ee tartanka UEFA Champions League? – Gool FM
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa la hadlay warbaahinta kaddib markii Manchester City ay u soo baxday wareega siddeeda ee tartanka UEFA Champions League.
Zinedine Zidane ayaa kulanka kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu u sheegay saxaafada:
“Maanta ma farxi karno, laakiin waa inaan ku faanaa wixii aan qabanay xilli ciyaareedkan”.
“Waxaan guuldarreysanay labo kulan oo aan la ciyaarnay koox wanaagsan, waana inaan aqbalnaa taas, waxaan helnay fursado qaar, laakiin si guul ah ugama faa’ideysan”.
“Waa inaan ku faanaa kooxdan (Real Madrid), waxa aan soo bandhignay xilli ciyaareedkan wuu fiicnaa, kulankan waxaan dooneynay inaan badino, laakiin fursado ayaan qasaarinay, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan wax walba ku soo bandhignay garoonka”.
“Ciyaaraha bug baxda ee labada kulan, waxay aheyd inaan ku badelno natiijada ciyaarta ee lugtii hore, balse uma raadin doono wax cudur daar ah”.
“Waa inaan u hambalyeynnaa kooxda Manchester City kaddib markii ay u soo baxday wareega xiga siddeeda ee tartanka UEFA Champions League”.